(၂၄) နှစ် - Haze ကျွန်ုပ်စိတ်ထဲမှထွက်သွားပြီးအခြားသူများနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်စွာဆက်ဆံနိုင်သည့်သင်၏ Brain On Porn
အသက် ၂၄ - မီးခိုးမြူသည်ကျွန်ုပ်၏စိတ်ထဲမှဖယ်ထုတ်ပြီးအခြားသူများနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောဆက်သွယ်မှုပြုသည်
ငါပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်ငါ့ကိုတကယ်အထောက်အကူပြုသောအရာတို့ကိုအကြောင်းကိုယခုခဏတစ် post ကိုစေခြင်းငှါအလိုရှိ၏။ ၎င်းသည်ရှည်လျားသောပို့စ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်ဆန္ဒရှိပါကရဲရင့်သောခေါင်းစဉ်များကိုသာကြည့်နိုင်သည်။ သင်စိတ်ဝင်စားသောအကြံပြုချက်များရှိပါကအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအကြံဥာဏ်များကိုဖတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည် ၂၄ နှစ်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဘာသာရေးအကြောင်းပြချက်များကြောင့်အများအားဖြင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုစတင်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်“ ဘာသာရေး” ကိုတင်းတင်းကျပ်ကျပ်ပြောခြင်းမရှိတော့ပါ၊ သို့သော် porn သည်ကျန်းမာသောလှုပ်ရှားမှုမဟုတ်သောတန်ဖိုးကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဆဲဖြစ်ပြီး၎င်းကိုအတွေ့အကြုံမှရရှိသည်။
ငါကရန်ခက်ခဲသည်ဆိုပါစို့သော်လည်းပြီးခဲ့သည့်5(လက်တွေ့ကျတဲ့နေစဉ်ပထမ 5, ပြန်လည်နာလန်ထူဖို့သီအိုရီချဉ်းကပ်မှုနှင့်အတူပြုကြရန်ရှိသည် အမှန် နှစ်ခု) အကြားတွင်ခြားနားချက်များပါစေ။ ငါသူတို့ကကူညီမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်
1. binary အမျိုးအစားများအတွက်စွဲကိုမကြည့်ပါနဲ့။ အစားပြန်လည်နာလန်ထူ၏ဘက်စုံအမြင်ကိုယူပါ
အတိတ်ကာလကကျွန်ုပ်၏စွဲလမ်းမှုကိုပျက်ကွက်ခြင်းသို့မဟုတ်အောင်မြင်ခြင်းသို့မဟုတ်အနာရောဂါအချို့မှ“ ပျောက်ကင်းစေခြင်း” အဖြစ်စဉ်းစားမိသည်။ အခုငါအဲဒါကိုပြန်လည်ထူထောင်ရေးလို့မြင်တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါတို့လုပ်သမျှအားလုံးဟာအချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအတွင်းမှာဖြစ်ပျက်နေတာကိုငါအသိအမှတ်ပြုလို့ပါပဲ နေ့ ၁၀၀ မှာတောင်မှငါဟာငါဟာ“ ကုသတယ်” ဒါမှမဟုတ်“ စွဲလမ်းမထားဘူး” ဒါမှမဟုတ်“ မပျောက်ကင်းဘူး” လို့မပြောဘဲ၊ အနာရောဂါငြိမ်းစရာ၏ဖြစ်စဉ်ကို, ရသောနေ့ရက်တိုင်းဤမျှကာလပတ်လုံးငါသည်အနိုးနိုးကြားကြားဆက်လက်တည်ရှိအဖြစ်ရှေ့တော်၌, ထက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပိုပြီးအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေတွေ့ရှိရန်သစ်တစ်ခုအခွင့်အလမ်းတတ်၏။
2 ။ ရုံ porn စွဲကနေပြန်လည်နာလန်ထူနှင့် ပတ်သက်. ဘဲ, Self-ရောင်ပြန်ဟပ်မှုအတွက်အချိန်အများကြီးဖြုန်း, ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့အသက်ရှည်သမျှဒေသများရှိ
ဂျာနယ်တစ်စောင်ဝယ်၊ တွေးတောဆင်ခြင်ပါ၊ တိုင်ပင်သူတစ် ဦး နှင့်တွေ့ပါ၊ သင်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုကိုပြောင်းလဲလိုသည့်သင်၏ဘဝကဏ္areasများကိုအာရုံစိုက်ရန်သင်ဘာလုပ်ရမည်ကိုပြုလုပ်ပါ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုမကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော့်အတွင်းပိုင်းတွင်အမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်နေသောအရာများကိုကြည့်ရှုရန်ကျွန်ုပ်၏စိတ်အာရုံတွင်ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာတွေ့ရသည်။ ညစ်ညမ်းခြင်းမှရှောင်ကြဉ်ခြင်းကမိမိကိုယ်ကိုပိုမိုရောင်ပြန်ဟပ်စေနိုင်ပြီး Self- ရောင်ပြန်ဟပ်ခြင်းကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုသာအာရုံစူးစိုက်ခြင်းမှရှောင်ရှားရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့အား porn ကိုပထမ ဦး ဆုံးကြည့်ရှုစေခြင်းအားဖြင့်အထောက်အကူပြုသည်။ ပြုပြင်တာတွေလုပ်ဖို့လိုတယ်၊ ကျိုးပဲ့နေတဲ့အပိုင်းကိုတက်တာ၊ ကုသခြင်းအားဖြင့်ငါတို့ဘဝရဲ့ကွဲပြားခြားနားတဲ့ကဏ္aspectsတွေဟာညစ်ညမ်းတဲ့စွဲလမ်းမှုကနေပျောက်ကင်းစေတဲ့ခရီးအပါအ ၀ င်တိုးတက်လာလိမ့်မယ်။
3 ။ Self-ရောင်ပြန်ဟပ်မှုအပြင်, သင့်တန်ဖိုးများကိုအာရုံစိုက်, သူတို့ကသင်၏အသက်တာ၏အဓိကအာရုံစူးစိုက်လုပ်
ဒီတစ်ခုကြီးမားသည်။ ငါသတိထားမိသည်မှာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုမည်သို့ရပ်တန့်ရမည်ကိုအာရုံမစိုက်ခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်ဘဝတွင်တန်ဖိုးရှိသောအရာများကိုရရှိရန်အာရုံစူးစိုက်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်ယခင်ဖြစ်ရပ်များထက်သွေးဆောင်မှုနှင့်အတူနည်းနည်းရုန်းကန်ခဲ့ရသည်ကိုသတိပြုမိသည်။ ကျွန်တော့်ရဲ့အဓိကတန်ဖိုးကတော့ငါ့ဘဝကငါ့ဘဝနဲ့ဆုံတွေ့တဲ့သူတိုင်းနဲ့စစ်မှန်တဲ့ရင်းနှီးချစ်ခင်ချင်တာပါ။ ဆိုလိုတာကငါပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ချင်တယ်။ သူစိမ်းများ၊ သူငယ်ချင်းများ၊ မိသားစုများသို့မဟုတ်ရင်ခုန်စရာအဖော်များကကျွန်ုပ်နှင့်အတူတူလူတစ် ဦး ဖြစ်ချင်သည်။ ငါကလူအမျိုးမျိုးနဲ့မတူတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ချင်တာမဟုတ်ဘူး၊ ငါကတခြားသူတွေကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိတဲ့လူတစ်ယောက်လိုသိစေချင်တယ်။ ဒါကငါ့အတွက်တန်ဖိုးအရှိဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ညစ်ညမ်းမှုကိုဒီကိစ္စမှာဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတာငါသိတယ်၊ အဲဒါကငါ့ရဲ့တန်ဖိုးတွေနဲ့အညီနေထိုင်ဖို့အတွက်အဟန့်အတားတစ်ခုဆိုတာငါသိတယ်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏စံနှုန်းများကို ဦး စွာထားပါကညစ်ညမ်းခြင်းသည်ကျွန်ုပ်ဘဝမှသဘာဝကျလိမ့်မည်။
ဒါ့အပြင်သင်ကသင်၏တန်ဖိုးများကိုနံပါတ်တစ်နေရာတွင်ထားရမည်။ ငါအရင်ကစိတ်လှုပ်ရှားစရာအကြောင်းတွေကြောင့်ညစ်ညမ်းမှုကိုစွန့်လွှတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ် (ငါ့ဘဝမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့ရာတွေကိုမုန်းတီးခြင်း၊ လူတွေရဲ့အကျင့်ပျက်ခြစားမှုတွေကိုမုန်းတီးခြင်း), ဒါပေမယ့်လအနည်းငယ်အကြာမှာ၊ အားလုံးကြာသည်နှင့်အမျှစိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုများနည်းတူနောက်ဆုံးတွင်စိတ်ခံစားမှုများသည်လည်းပျောက်ကွယ်သွားတော့သည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစဉ်းစားမိသည်မှာ“ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုငါမနှစ်သက်တော့ဘူး။ ငါဟာပိုပြီးစိတ်ဓာတ်တက်ကြွလာစေရန်ထပ်ခါထပ်ခါမုန်းတီးမှုကိုလိုချင်တယ်။ ဒါကြောင့်ငါက porn ကိုနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ကြည့်တော့ဒါကိုမုန်းခြင်းပြန်ပေါ်လာလိမ့်မယ်။ ” ထိုသို့ပြန်ဆုတ်ဖို့ ဦး ဆောင်ခဲ့ဘူး။ ယခုတွင်ငါသည်ငါ၏အဓိကတန်ဖိုးများအပေါ်အာရုံစူးစိုက်နေပါတယ်, ထိုကျိန်းသေစိတ်ခံစားမှုကဲ့သို့လျင်မြန်စွာသို့မဟုတ်အလွယ်တကူပြောင်းလဲပစ်ကြဘူး။
၄။ လစဉ်၊ သီတင်းပတ်တိုင်းနှင့်နေ့ရက်တိုင်းကို“ အသစ်အဆန်းစတင်ရန်” အခွင့်အလမ်းတစ်ခုအဖြစ်ဆက်ဆံပါ။
အကယ်၍များ အရာဝတ္ထုများကိုအချိန်အပိုင်းအခြားငယ်များအဖြစ်ခွဲခြမ်းလိုက်ရင်လူသားတွေဟာသူတို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေပြည့်မီဖို့အများကြီးပိုကောင်းကြပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်တွင်ပြောင်းလဲမှုကိုကျွန်ုပ်တို့ခွဲခြားပုံသည်ရေရှည်တည်တံ့သောအလေ့အထများကိုတည်ဆောက်ရာ၌အလွန်ထိရောက်နိုင်သည်။ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းအသစ်သောအရာအဖြစ်ရှုမြင်ခြင်းထက်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းအသစ်သောအရာတစ်ခုခုဟုသင်ယူဆပါကအလေ့အထအသစ်ကိုယူရန် ပို၍ လွယ်ကူသည် (နှစ်သစ်ကူးဆုံးဖြတ်ချက်များကိုတစ်နှစ်တစ်ကြိမ်ပြုလုပ်သည်၊ ဇန်နဝါရီလအကုန်တွင်၎င်းတို့ပျက်ကွက်သည်ကိုတွေ့မြင်ရန်သာဖြစ်သည်) ။ အဲဒီအစားသူတို့ကိုလသစ်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ၊ ရက်သတ္တပတ်သစ်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေဒါမှမဟုတ်နေ့သစ်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေအဖြစ်သတ်မှတ်ပါ။ တစ်ခါကဒီနေရာမှာတစ်ယောက်ယောက်ကကျွန်တော့်ကိုတကယ်စိတ်ထိခိုက်စေတဲ့အကြံပေးချက်ကိုဖတ်ခဲ့တယ် -“ မင်းဟာ porn မပါဘဲအရှည်ဆုံးလုပ်ရတော့မယ်။ ဆိုလိုတာကဒီတစ်ကြိမ်မှာတစ်ရက်ကိုအာရုံစိုက်ခြင်းအားဖြင့်ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်အောင်လုပ်တာပါ။
5 ။ ရက်ပေါင်းမဟုတ်ဘဲအလင်းတန်းများဖြာအတွက်ပြန်လည်နာလန်ထူ၏စဉ်းစားပါ
ဤသည်ငါ့အဘို့တော်တော်လေးမကြာသေးမီကဗျာဒိတ်တော်ဖြစ်၏။ ငါဒီနှစ်နောက်တစ်ခါ porn မကြည့်ရင် ၈ လလုံးလုံးလုံးဝညစ်ညမ်းမှုမရှိဘူးလို့ငါထင်ခဲ့တယ် (ဖေဖော်ဝါရီ - Aprilပြီလ ၈ ရက်ပြန်ကျင့်ခဲ့တယ်) ။ ဒါပေမယ့်အဲ့ဒီနေ့တွေကြားမှာပင်ကျွန်ုပ်သည်ညစ်ညမ်းမှုကင်းသောနေ့များအားလုံးကိုမမေ့သင့်ပါ။ “ ငါက ၈-၁၂ လလုံးလုံးလိင်တူချစ်သူဖြစ်ခဲ့တာ” လို့ပြောမယ့်အစား“ ဒီနှစ် ၃၅၇/၃၆၅ ရက်အတွက်ငါကင်းလွတ်ခွင့်မရှိဘူး” လို့ပြောနိုင်တာကပိုပြီးအားရှိစရာပါ။
6 ။ သငျသညျသွားလေရာရာ၌သင်တို့ကိုညစ်ညမ်း-အခမဲ့ဖြစ်ကြောင်းသူတို့၏နေ့ရက်ကာလကိုပယ်ဖြတ်ကူး, သင်တို့နှင့်အတူငယ်လေးတစ်ပြက္ခဒိန်သယ်ဆောင်
ငါအစဉ်အမြဲငါ့ကျောအိတ်ကပ်ထဲမှာသယ်ဆောင်ပေးသောသေးငယ်တဲ့ Moleskine notepad ရှိသည်။ ငါတစ်နေ့ပယ်ဖြတ်ကူးဖို့သာညဥ့်အချိန်တွင်အသုံးပြုရန်သော်လည်းငါသွားလေရာရာ၌ငါ porn-အခမဲ့ဖြစ်ချင်သောကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သတိပေးအမြဲငါနှင့်အတူပါကစောင့်ရှောက်လော့။
လများကုန်လွန်လာသည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်၏ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့်ပတ်သတ်သောကွဲပြားခြားနားသောသင်္ကေတများကိုထပ်မံထည့်သွင်းခဲ့သည်။ ငါ porn ကိုမကြည့်လျှင်, ငါတစ်နေ့လုံးမှတဆင့် X ကိုထားတော်မူ၏။ ငါ porn ကိုကြည့်လိုက်ရင်တစ်နေ့တာကို O. နဲ့ပတ်လိုက်တယ်။ ငါတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခဲ့ရင်ငါ O တစ်ခုနဲ့ဝိုင်းလိုက်တယ်။ ဒါပေမယ့် X ကိုရက်စွဲကိုလည်းထည့်လိုက်ပါ။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည်၊ သို့သော်အော်ဂဇင်မပြုပါက၊ X နှင့်အတူသေးငယ်သည့်အရာတစ်ခုဆွဲပါမည်။ ကျွန်ုပ်သည်ညအချိန်တွင်“ စိုစွတ်သောအိပ်မက်တစ်ခု” ရှိပါကမတိုင်မီနှင့်ပြီးနောက်သို့ရောက်သောအချိန်ကာလကိုခွဲခြားသတ်မှတ်သည် (ထို့ကြောင့် ၁၄ ပုံရသည်။ | 15) ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သင်စိတ်ကူးရ။ တတ်နိုင်သမျှသင့်ရဲ့ခရီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဖြစ်အသေးစိတ်ဖြစ်လိမ့်မည်။
7 ။ သင်သည်သင်၏စွဲခြင်းနှင့်ချမ်းသာရမည်ရန်သင့်အလိုဆန္ဒနှင့် ပတ်သက်. နှင့်အတူအဆင်ပြေကဲ့သို့များစွာသောလူကိုပြောပြပါ
သင့်ကိုတာဝန်ခံနိုင်သူများများလေလေဖြစ်သည်။ လူနဲ့စကားပြောဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးဆိုတာမင်းသိထားတယ်။ မင်းနဲ့အတူတူပဲ။ သို့သော်ရဲစွမ်းသတ္တိနှင့်အားနည်းချက်ကိုခြေလှမ်းလှမ်းခြင်းသည်သင်၏တန်ဖိုးများကိုအာရုံစိုက်ရန်အစွမ်းထက်သောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိလူများနှင့်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှုသည်ကျွန်ုပ်အားကျွန်ုပ်ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်လုံခြုံမှုပိုက်ကွန်ကြီးတစ်ခုရှိသည်ကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်အထောက်အကူပြုသည်။ သူငယ်ချင်းများနှင့်စကားပြောသောအခါညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုကြည့်လိုစိတ်မရှိကြောင်းကိုလည်းသတိပြုမိသည်။ ကျွန်ုပ်၏စွဲလမ်းမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကောင်းသောစကားပြောဆိုသည့်အခါ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ကိုခွန်အားနှင့်အားပေးမှုဖြစ်သည်။
8 ။ ဒါကြောင့်သင့်ကိုယ်သင်အရှိဆုံး relapsing ကိုရှာဖွေနေပါသည်နေရာတိုင်းမှာသင့်ရဲ့အခန်း၏ပရိဘောဂပွနျလညျဖှဲ့စညျး
အကယ်၍ ညအချိန်တွင်သင်၏အိပ်ခန်းသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုသင်အမြဲကြည့်ရှုနေသည့်နေရာဖြစ်သည်ဆိုလျှင်သင်၏အခန်းအားသင်၏အခန်းအပြင်အဆင်အားပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်းအားအချိန်ဖြုန်းပါ။ ငါပတ် ၀ န်းကျင်သည်ညစ်ညမ်းသောအရာနှင့် ပတ်သတ်၍ ဘာမှမရှိလျှင်ပင်ကျွန်ုပ်တို့၏ပတ်ဝန်းကျင်သည်ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုရန်အစပျိုးနိုင်သည်ကိုသတိပြုမိသည်။ မြို့ကြီး ၂ မြို့အကြား၊ တစ်ပတ်မှာအလုပ်တစ်ခုနဲ့တနင်္ဂနွေနေ့တွေမှာငါ့အမေအိမ်မှာအချိန်ဖြုန်းတယ်။ စနေ၊ တနင်္ဂနွေနေ့တွေမှာကျွန်တော်ပြန်လာတိုင်းပြန်ရလိမ့်မယ်ဆိုတာအချိန်အကြာကြီးကျွန်တော်သတိထားမိခဲ့တယ်၊ အချိန်ပိုရလို့မရ၊ ငါကြီးပြင်းလာတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပြန်လည်သက်ဆိုင်တဲ့အပျော်အပါးကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ဆက်စပ်မိလို့ပါ။ ငါအများဆုံး relapsed ရှိရာ၌တည်၏။ ပရိဘောဂများကိုပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခြင်းကကျွန်ုပ်တို့၏ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်ရှုသည့်ဤထုံးတမ်းစဉ်လာကိုချိုးဖျက်နိုင်သကဲ့သို့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုမဆင်ခြင်ဘဲကြည့်နေသည့်ကျွန်ုပ်တို့၏အကျင့်ကိုချိုးဖျက်နိုင်သည်။
9 ။ ကြောင်းတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေနှစ်ခုဘေးများ၏အပြောင်ဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်နည်းတူကိုယ်ထိလက်ရောက် (မပိုဒီတော့လျှင်) ကိုနှိုးဆွ porn ထက်ဖြစ်နိုင်သည်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိကိုသတိရပါ
လွန်ခဲ့သောလအနည်းငယ်ကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသို့သွားသောအခါကျွန်ုပ်အလွန်အံ့အားသင့်ခဲ့မိသည်။ သို့သော်တစ်ခန်းလုံးကိုပွတ်သပ်လိုက်ခြင်းထက်အိပ်ခန်းထဲ ဝင်၍ အမှန်တကယ်“ ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ခန္ဓာကိုစူးစမ်းခြင်း” (ဆိုလိုသည်ဖြစ်စေ) အချိန်ကိုကုန်လွန်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်လိင်မှုကိစ္စလွတ်မြောက်ရေးကိုအာရုံစိုက်ရန်မဟုတ်ပါ၊ အမှန်တကယ်ဖြစ်စေ၊ စိတ်ကူးရှိသည့်ဖြစ်စေမည်သည့်ပုံရိပ်မျိုးကိုမဆိုအသုံးပြုခြင်းမရှိဘဲလက်ရှိဖြစ်ခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်၏ခံစားချက်နှစ်သက်မှုကိုခံစားရန်လှုံ့ဆော်ခြင်းအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ရန်မဟုတ်ပါ။
သို့သော်သတိပြုရန်စကားလုံးတစ်လုံးလိုအပ်သည်။ တစ်ခါတလေဒီလိုလုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာကိုယ်ကိုကိုယ်သိသောစိတ်ဟာစိတ်ပျက်စရာကောင်းနေတုန်းပဲဆိုတာသတိပြုမိပြီး၊ အချို့သောနည်းလမ်းများဖြင့်ခံစားမိသည်မှာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကြည့်ခြင်းနှင့်အတူတူပင်ခံစားချက်များကိုထုတ်လွှင့်နိုင်သည် - ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းသည်အစားထိုးစွဲလမ်းမှုဖြစ်လာနိုင်သည်။ ကျေးဇူးတင်စရာကတော့ဒါဟာငါတို့ရဲ့ dopamine level ကိုဒါမှမဟုတ် porn လိုမျိုးပြင်းပြင်းထန်ထန်ချန်ထားတယ်လို့မထင်ပါဘူး၊ ဒါကြောင့်ဒီအချက်ကိုသတိထားပါ၊ သင်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာကိုလျှော့ချဖို့တောင်သင်လုပ်နိုင်ကောင်းလုပ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
10 ။ သွားရောက်ကြည့်ရှုနဲ့ post / အပေါ်မှတ်ချက်ပေးရန် / r / pornfree တတ်နိုင်သမျှ
ဒီနေရာမှာလူအများစုကအနည်းဆုံးနေ့စဉ်ဒီနေရာမှာဘာတွေတင်နေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပုံမှန်အားဖြင့်စစ်ဆေးလေ့ရှိပြီးအသစ်သောလူများထံမှဒီပုဒ်မနဲ့လူနေမှုပုံစံစတဲ့နေရာတွေမှာတင်ထားတာတွေကိုမှတ်ချက်ပေးဖို့၊ လစဉ်စိန်ခေါ်မှုများတွင်ပါ ၀ င်ရန်လည်းအကြံပေးလိုသည်။ ၎င်းသည်အနိုင်ရရန်အတွက်ကစားရုံမျှသာမဟုတ်သကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့သည်“ စူပါပါဝါ” များကိုသာရှာဖွေနေသည်သို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစံချိန်ကိုရိုက်နှက်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ညစ်ညမ်းမှုကင်းမဲ့ခြင်းဆိုသည်မှာအသွင်ပြောင်းထားသောဘ ၀ ကိုရှင်သန်ခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့အမြဲဖြစ်လိုသူဖြစ်လာမည့်ဖြစ်ခြင်း၊ အတိတ်ကာလကလုပ်နိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အခုငါတို့အားလုံးဒီမှာရှိနေပြီးပြောင်းလဲချင်နေပြီ။
ကျွန်ုပ်တွေ့မြင်ခဲ့ရသောအကျိုးကျေးဇူးများသည်ကျွန်ုပ်၏အကြံပေးခြင်းနှင့်အတူမေလကတည်းကကျွန်ုပ်သွားခဲ့ဖူးသောအကျိုးကျေးဇူးများ။ ငါဟာလူတွေအကြောင်းစိတ်မ ၀ င်စားတော့ဘူး၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်စိတ်ချမှုပိုရှိလာတယ်၊ ငါဟာဘ ၀ ကိုပိုကောင်းအောင်ပြောင်းလဲဖို့တက်ကြွစွာလုပ်ဆောင်နေတာမို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအခုပိုပြီးသဘောကျတယ်။ သငျသညျဤမကြာခဏစကားကိုနားထောငျနိုငျသျောလညျး, ငါငါ့အတှေးအချေါပိုမိုရှင်းလင်းပြတ်သားရှိသည်နှင့်တူသောငါခံစားရတယ်မီးခိုးမြူငါ့စိတ်ထဲကနေဖယ်ရှားသကဲ့သို့ငါခံစားရတယ် (အမှတ်2ကိုကြည့်ပါ) နှင့်အပြန်အလှန်ပိုမိုထိရောက်သောစွမ်းရည် အခြားသူများနှင့်အတူ။
LINK - 100 ရက်အကြာမှာတချို့ကသီအိုရီနှင့်လက်တွေ့အကွံဉာဏျ